Akara ngosi Crypto efu kacha mma Mee 2022 & Akụkọ Crypto | cryptosignals.org
Ihe ngosi Ethereum
Ihe mgbaàmà Binance
Ihe ngosi Cardano
Ihe ngosi Polkadot
Ngwa ahịa azụmaahịa Crypto kacha mma
Gịnị bụ Crypto Market na gịnị kpatara I kwesiri iji zụọ ya? Mmalite nke Nduzi
Kachasị Crypto Signals Telegram Groups - Nduzi zuru ezu
Ndị na -ere ahịa Bitcoin kacha mma
Ndị na -ere ahịa Ethereum kacha mma
Otu esi azụta ihe nlebara anya Basic
Otu esi azụta Solana
Otu E Si Eji Ego Eme Ihe
Etu esi agụ ụzọ abụọ
Etu esi edobe ahia
Mụta ka esi azụ ahịa Crypto ụbọchị
Mụta iji Swing Trade Crypto
Kedu ihe bụ Crypto Pips
Jiri kaadị kredit zụta Crypto
Jiri kaadị debit zụta Crypto
Soro ndị VIP Telegram Group anyị
Nkwụnye ego na eToro iji nweta akara ngosi VIP anyị n'efu!
Azụmaahịa Ugbu aTinye ego 250$ na eToro iji nweta akara ngosi VIP anyị n'efu! Zụọ ọtụtụ puku CFDs
Ihe ngosi kacha mma Crypto 2022
CryptoSignals.org bụ otu ndị ahịa zụrụ azụ nke na-azụ ahịa ahịa ahịa ahịa kemgbe 2014
Anyị kpebiri iguzobe obodo telegram ka ndị ọzọ nwee ike ịmụta site na akara ngosi cryptocurrency ziri ezi anyị.
Sonye na Telegram anyị na-akwụghị ụgwọ
Mepee mgbaàmà Cryptocurrency kwa ụbọchị
Soro anyi Otu VIP site na ịhọrọ ngwugwu dị n'okpuru nke dabara adaba maka gị, anyị na-enye nkwa ịkwụ ụgwọ ego ụbọchị 30 zuru oke yabụ na ọ nweghị ihe ga-efunahụ site na ịnwale akara ngosi cryptocurrency dị elu.
Illedgwọ Monthly £ 42
Ihe nrịba ama 2-3 kwa ubochi
82% Ọnụego Successga nke Ọma
Ntinye, Were Uru & Kwụsị Nfu
Onu ogugu di egwu na ahia ahia
Regwọ Ọrụ Risgwọ Ọrụ Egwu
kasị Popular Illedgwọ Quarterly £ 78
Illedgwọ BI-KWES .R. £ 114
Illedgwọ kwa afọ £ 210
Họrọ ndị kacha mma emebi emebi na mba gị
Bụrụnụ Ọkachamara Ọkachamara!
Mepee akaụntụ na otu nke ore anyị. Nweta ndụ anyị niile Ihe mgbaàmà VIP Crypto maka FREE! Debanye aha ma tinye opekempe 250$ n'aka onye na-ere ahịa Crypto ahọrọla n'okpuru.
eToro bụ ikpo okwu bara ụba nke na-enye ma itinye ego na Forex, Ahịa, na Cryptocurrencies, yana azụmaahịa CFD. CFDs bụ ngwa dị mgbagwoju anya na -abịa na nnukwu ihe egwu nke ịlafu ego ngwa ngwa n'ihi leverage.
CFDs bụ ngwa mgbagwoju anya ma nwee nnukwu ihe ọghọm nke ịlafu ego ngwa ngwa n'ihi itinye ego. 71.2% nke ihe ndekọ ego ndị na-ere ahịa na-efufu ego mgbe ha na-azụ ndị CFDs na onye ọrụ a.
Ruo 500: 1 leverage, zụọ puku kwuru puku CFD na akụrụngwa Leverage dị. Indices, FX, Crypto na ndị ọzọ n'otu ebe. Anyị na-aga nke ọma site n'inye interface enyi na enyi na ihe ọhụrụ.
Soro anyi Free Telegram Otu
Anyị na-eziga akara 3 VIP otu izu na nke anyị free Telegram otu, mgbaàmà ọ bụla na-abịa na nyocha ọrụ zuru ezu banyere ihe mere anyị ji ewere ahịa na otu esi etinye ya site na onye na-ere ahịa gị.
Nweta ihe ndị otu VIP dị ka isonyere ugbu a n'efu!
Sonye na Telegram anyị na-akwụghị ụgwọMụta maka mgbaàmà anyị
Oflọ nke akara akara Crypto kacha elu
Anapụta gị Telegram Ngwa na Real-Oge!
Ndị otu anyị na-azụ ahịa n’ụlọ na CryptoSignals.org na-enyocha ahịa mkpuchi elekere niile ka ịghara ime. Site na nchikota nke nyocha oru di omimi, AI algorithms, na nyocha nke oma - CryptoSignals.org na-acho ohere ahia maka ndi otu anyi.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi ị na-eleta anyị, kwe ka anyị kọwaa ihe anyị na-eme ebe a CryptoSignals.org
GỌ AKW THEKWỌ kachasị ọhụrụ na akụkọ anyị na nkà na ụzụ
Amụma ọnụahịa DeFi Coin: DEFC/USD Azụmahịa nso $0.30 Nguzogide
Amụma ọnụ ahịa Lucky Block: LBLOCK/USD Na-aga n'elu
Ntinye Bitcoin na mgbanwe na-agbada ruo ọnwa 18 dị ala na Mee ka ụjọ ahịa na-ebuli.
Azụmahịa Bitcoin (BTC/USD) na $30,000
Cardano na-agbakọ n'elu $0.50 Nkwado maka nlọghachi ọnụ ahịa enwere ike
TerraUST (USTUSD) Na-eji ụta Bearish na-amalite mmemme ahịa
Amụma ọnụahịa DeFi Coin: DEFC/USD dị ka ọnụ ahịa na-aga na North
Amụma ọnụ ahịa Lucky Block: LBLOCK/USD Spikes N'elu $0.0025
Ebubo atụmatụ Ponzi megide LUNA na-apụtaghachi n'eso okwu adịghị mma sitere n'aka onye isi ala Terra.
Bitcoin Cash (BCH/USD) Azụmahịa Ahịa n'okpuru ịda mbà n'obi
Ethereum na-agbakọ n'elu $1,763 ka ọ na-akwado ịweghachite $2,200
Terra (LUNAUSD) Bears Deal mbufụt n'ahịa ahụ
Ihe Get Banye
Anyị Mmeri Cryptocurrency
Nbanye VIP Group
Ọ bụrụ n ’ịbụ onye ọhụụ n’ahịa cryptocurrency na ị ga - achọ ịmụ etu esi azụ ya, jikwaa ihe egwu dị n’ ọfụma ma mee ka akaụntụ azụmaahịa gị baa uru wee hụkwuo ihe anyị na - enye n’okpuru.
Ebumnuche anyị iji nweta pips 1500 kwa ọnwa kwa ahia Bitcoin naanị!
Azụmaahịa ọ bụla na-abịa na nyocha zuru ezu, na-akọwa ihe kpatara anyị ji agba ahia ahụ, anyị na-eme nke a ka ị wee mụta ka ị na-azụ ahịa.
KWESR RE REgwọ
Anyị na-ekwupụta n'ụzọ doro anya RRR (ụgwọ ọrụ-ụgwọ ọrụ) na azụmaahịa ọ bụla ma rụọ ọrụ na 1: 2 & 1: 3 ruru ka ị ghara itinye nnukwu nsogbu na azụmaahịa ma nwee ohere dị elu iji nweta uru.
A na-ezipụ ihe mgbaàmà anyị naanị site na Telegram, n'ụzọ ahụ ozugbo akararị ahụ sitere, ọ na-abịara gị ozugbo.
Site na isonyere ndị VIP anyị, ị na - emepe akụ na ụba nke ihe ọmụma na ahụmịhe n'aka ndị ahịa anyị, ịkwụ ụgwọ ọnwa ọ bụla pụtara na ị na - esonye ELITE
Anyị trades na-abụghị mgbe niile ahịa egbu, otú ị ga-enwe ọtụtụ oge iji banye n'ụgbọ na ha, anyị siwing ahia, ahịa ala isi na anyị na-eji dị iche iche nke trades dị ka ịzụta nkwụsị, ere nkwụsị & ịzụta oke wdg…
Soro ndi otu ndi Telegram anyi n’eche
Anyị na-eziga akara 3 VIP otu izu na otu Telegram anyị na-akwụghị ụgwọ, akara ọ bụla na-abịa na nyocha ọrụ zuru ezu banyere ihe kpatara anyị ji ewere ahịa na otu esi etinye ya site na onye na-ere ahịa gị.
Olee otú mgbaàmà Crypto anyị si arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ị bụ ụwa ọhụụ na ụwa nke mgbama crypto, kwe ka anyị kwatuo ihe bụ isi maka gị na Usoro Layman.
Ọnọdụ bụ isi nke akara crypto bụ na ị ga-enweta ntụnye ahịa. Nke a ga-abịa site na ezigbo oge site na
telegram - yabụ na ị gaghị echefu ohere ịzụ ahịa azụmaahịa. Ihe mgbaàmà ọ bụla nke otu na CryptoSignals.org eziga ga-ebu a set nke ozi dị mkpa. Ọ bụ ozi a na - agwa gị otu ị ga - esi erite uru na akara anyị site na ịtụkwasị
iwu dị iche na onye ahịa ị họọrọ. Iji nye gị echiche nke ihe a CryptoSignals.org mgbaàmà crypto dị ka - lelee ihe atụ maka LTC / USD n'okpuru:
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, akara ngosi kacha mma crypto kwesịrị ịnwe isi ihe data ise mgbe niile. Nke a bụ ụzọ crypto n'onwe ya - nke dị na ihe atụ a, bụ LTC / USD. Ga - ahụ na mgbaàmà ahụ kọwapụtara ka ọ gaa ogologo oge - nke pụtara na onye nyocha ụlọ na - eche na ụzọ ahụ ga - aba uru. Nke kachasị mkpa, akara ngosi crypto kachasị mma kwesịkwara iji njedebe achọrọ, nkwụsị nkwụsị, na ọnụ ahịa ego iji nweta uru. Ọ bụrụ n ’ịbụ onye ọhụụ nye usoro azụmaahịa ndị a, ọ kachasị mma na ị nwere nghọta siri ike nke ihe ndị a pụtara tupu ị debanye aha maka ọrụ mgbaàmà crypto.
Iji nyere aka kpochapụ alụlụụ, anyị na-akọwa isi ihe ama ama dị iche iche n'okpuru.
Kedu ihe akara CRYPTO kacha mma kwesịrị ịdị ka?
Nke a bụ mmebi nke ihe kacha mma akara ngosi crypto kwesịrị ịdị - na ihe okwu ọ bụla pụtara.
Nke a bụ ezigbo nkọwa. A sị ka e kwuwe, ọ na-aga n'ekwughị na ị ga-achọ ịma ụdị ụzọ mgbaàmà anyị metụtara. Anyị kwesịrị iburu n’uche na ndị nyocha n’ime ụlọ na CryptoSignals.org mara ọpụrụiche n’ọma ahịa cryptocurrency dị iche iche. Ọbụghị naanị nke a gụnyere crypto-to-fiat, mana ụzọ abụọ crypto-to-crypto. Maka ndị na-amaghị, otu ụzọ crypto-to-fiat ga-enwe otu ego dijitalụ dị ka Bitcoin na otu ego ego dị ka dollar US. N'ihe atụ a, a ga-anọchite anya ụzọ abụọ ahụ dị ka BTC / USD. Na mberede, nke a bụ ụzọ ahịa azụmaahịa kacha azụ ahịa na ụlọ ọrụ ahụ - yana ọtụtụ ijeri dollar na-agbanwe aka kwa ụbọchị. N'iburu nke a n'uche, ọtụtụ n'ime akara crypto ị na-enweta n'aka anyị, CryptoSignals.org ga-echekwa na ahịa a. Otú ọ dị, ndị ahịa anyị makwaara ịzụ ahịa dịgasị iche iche nke crypto-to-crypto. Nke a gụnyere ihe amasị nke BTC / ETH - nke pụtara na anyị na-ere ahịa mgbanwe mgbanwe n'etiti Bitcoin na Ethereum. Otu uzo ozo nke ozo ...
Igodo ọnụọgụ ndị ọzọ bụ nke amanyere bụ iwu na oghere akara crypto bụ ụzọ ahịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-aga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ na ahia? Enweghị ozi a, akara crypto ga-abụ ihe na-abaghị uru. Maka ndị na-amaghị: Ọ bụrụ na akara mgbama anyị na-agwa gị ka ị gaa ogologo oge, nke a pụtara na anyị chere na ụzọ ahụ ga-abawanye uru Ọ bụrụ na akara mgbaaka anyị na-agwa gị ka ị gaa mkpụmkpụ, nke a pụtara na anyị chere na ụzọ ahụ ga-ebelata na uru Iji mekwuowanye: Ọ bụrụ na akara crypto na-agwa gị ka ị gaa ogologo oge, mgbe ahụ ịkwesịrị itinye iwu ịzụta ihe na onye na-ere ahịa ịchọrọ ịhọrọ Ọ bụrụ, agbanyeghị, akara mkpuchi na-agwa gị ka ị gaa mkpụmkpụ, mgbe ahụ ị ga-ahọrọrịrị maka ire ere Otu anyị ndị nyocha na PipSignals nwere ntụsara ahụ na-aga ogologo na mkpụmkpụ na ụzọ abụọ crypto. N'ụzọ dị oke mkpa, enweghị mmetụta mmetụta uche na ụdị ego dijitalụ anyị na-ere. Kama, ebumnuche anyị bụ iji nweta uru site n'ọkwá ahụ. ...
Ordergba Ọnụ Ahịa
Emehiela banyere ya - ihe nrịba ama kachasị mma ga-abịa na ọnụahịa ego achọrọ achọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ maka ịzụ ahịa, ị nwere nhọrọ abụọ mgbe ị na-abanye n'ahịa. Site na ndabara, ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-ajụ gị ma ịchọrọ itinye 'usoro ahịa'. Nanị nke a pụtara na onye na-ere ahịa ga - emezu ahịa gị ozugbo - na ọnụ ahịa dị ọzọ. Agbanyeghị na nke a dị mma maka itinye ego ogologo oge, ọ naghị adabara adaba maka azụmaahịa mkpụmkpụ. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ihe ọghọm-iweghara ịbanye ahịa na ọnụahịa akọwapụtara - dịka nyocha emere na-egosi. Ọmụmaatụ, ka anyị were ya na anyị na CryptoSignals.org na-ere ahịa BTC / USD - nke ugbu a ọnụahịa $ 49,500. Ndị otu anyị na-enyocha ụlọ nwere ike ile anya na teknụzụ wee kpebie na BTC / USD ga-emebi $ 50,000 - mgbe ahụ, a ga-ewere ọnọdụ dị ogologo. Iji hụ na anyị na-abanye na ọnụahịa karịa $ 50,000 - ọ bụghịkwa curren ...
Kwụsị-Loss Order Ahịa
Ruo ugbu a, anyị achọpụtala na akara ngosi crypto kachasị mma ga-agwa gị ụdị ụzọ ị ga-azụ, ma ị kwesịrị ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, yana kedu ọnụahịa ntinye ị kwesịrị ịtọ usoro ịgba gị. Otú ọ dị, nke a bụ nanị ọkara agha ahụ. A sị ka e kwuwe, iji zụọ ahịa n'ụzọ na-adịghị ize ndụ, ị kwesịrị ịnwe usoro ntinye. Ọzọkwa, anyị nọ na CryptoSignals.org hụ na ị nwere ozi niile ịchọrọ iji rite uru site na akara crypto - nke mere na anyị na-enye iwu nkwụsị na nkwụsị na-aba uru. Banyere nkwụsị-ọnwụ, nke a bụ ngwa ọrụ njikwa ihe egwu na-egosi na anyị anaghị atụfu nnukwu ego na azụmaahịa - ọ bụrụ na ọ gaghị aga atụmatụ. Nke a dị mkpa, dịka ọ bụ ezie na anyị nwere ndekọ dị ogologo nke ịmepụ ahịa ahịa crypto - anyị anaghị ekwu na anyị meriri azụmaahịa ọ bụla. Kama nke ahụ, ahịa ga-ada mgbe niile. N'iburu nke a n'uche, anyị na-atụ aro ọnụahịa ego nkwụghachi ụgwọ kwesịrị ekwesị nke ịkwesịrị idenye mgbe ị na-eme akara ngosi crypto. Na cr ...
Were-Uru Order Ahịa
E nwere ozi dị mkpa dị mkpa karịa akara kacha mma crypto ga - enye gị - nke ahụ bụ ọnụ ahịa ịtụ ahịa iji nweta uru. Nke a na - arụ otu ọrụ dị ka iwu nkwụsị, mana kama ịbelata ihe egwu anyị, ọ ga - achọ igbachi uru anyị na azụmaahịa ahụ. N'ihe atụ anyị nyere na mbụ, anyị kwuru na ọnụ ahịa ịtụ ahịa-aba uru bụ $ 238.74. Nke a na-anọdụ na 3% karịa ọnụahịa nkwụnye ego a tụrụ aro nke $ 231.79 - nke pụtara na anyị na-achọ inweta uru nke 3% na akara ngosi crypto a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọnụ ahịa na-enweta ego ga-adaba site na ahịa - onye na-ere ahịa crypto na ajụjụ ga-emechi ahịa ahụ na-akpaghị aka. Dị ka ndị dị otú a, anyị nwere ike igbachi na uru anyị na-enweghị mkpa ịnọdụ ala na ngwaọrụ anyị iji jiri aka wepu ọnọdụ ahụ.
Egwu na ụgwọ ọrụ
Na-eduga na ngalaba ahụ dị n'elu na nkwụsị nkwụsị na iji nweta ego, ndị otu nyocha na CryptoSignals.org ga-enwe ihe egwu / ụgwọ ọrụ mgbe niile mgbe ha na-ezipụ akara crypto. Na ihe atụ dị n'elu, ihe egwu dị na 1% - dịka nke ahụ bụ ihe ọnụahịa nkwụsị-efu anyị tụrụ aro. Rewardgwọ ọrụ nke akụkụ ahụ bụ 3% - dịka nke ahụ bụ ebe anyị debere usoro iji nweta-uru anyị. N'ụzọ dị oke mkpa, ọtụtụ nrịbama crypto anyị na-ezipụ ga-agbaso oke ihe ize ndụ / ụgwọ ọrụ 1/3. N'okwu dị mfe, nke a pụtara na anyị na-etinye 1% nke isi obodo anyị n'ihe ize ndụ iji nweta uru nke 3%. N'ime nke a, naanị anyị kwesịrị inwe otu azụmaahịa na-aga nke ọma n'ime atọ ọ bụla iji nweta uru.
Nke a bụ ezigbo nkọwa. A sị ka e kwuwe, ọ ga-ekwupụta na ị ga-achọ ịma ụdị ụzọ mgbaàmà anyị metụtara.
Anyị kwesịrị iburu n'uche na ndị nyocha ụlọ n'ime CryptoSignals.org mara ọfụma n'ọtụtụ ahịa ahịa cryptocurrency. Ọbụghị naanị nke a gụnyere crypto-to-fiat, mana ụzọ abụọ crypto-to-crypto.
Maka ndị na-amaghị, otu ụzọ crypto-to-fiat ga-enwe otu ego dijitalụ dị ka Bitcoin na otu ego ego dị ka dollar US. Na ihe atụ a, a ga-anọchite anya ụzọ abụọ ahụ dị ka BTC / USD.
Na mberede, nke a bụ ụzọ ahịa azụmaahịa kachasị azụ ahịa na ụlọ ọrụ ahụ - yana ọtụtụ ijeri dollar na-agbanwe aka kwa ụbọchị. N'iburu nke a n'uche, ọtụtụ n'ime akara crypto ị na-enweta n'aka anyị, CryptoSignals.org ga-echekwa na ahịa a.
Otú ọ dị, ndị ahịa anyị makwaara ịzụ ahịa dịgasị iche iche nke crypto-to-crypto. Nke a gụnyere ihe amasị nke BTC / ETH - nke pụtara na anyị na-ere ahịa ọnụego mgbanwe n'etiti Bitcoin na Ethereum.
Uzo ozo di na crypto nke ndi nyocha anyi n’ime ulo bu ahia ahia XRP / XLM. Nke a mejupụtara Ripple na Stellar ma ọ na-enye ọtụtụ ohere mgbaàmà crypto n'ihi oke mgbanwe ya.
Igodo igodo ndị ọzọ dị mkpa na oghere akara crypto bụ ntụzịaka nke ahịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-aga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ na ahia? Enweghị ozi a, akara crypto ga-abụ ihe na-abaghị uru.
Maka ndị na-amaghị:
Ọ bụrụ na akara mgbaaka anyị na-agwa gị ka ị gaa ogologo oge, nke a pụtara na anyị chere na ụzọ ahụ ga-abawanye uru
Ọ bụrụ na ihe mgbaàmà anyị na-agwa gị ka ị mechaa, nke a pụtara na anyị chere na ụzọ ahụ ga-ebelata na uru
Iji nwetakwuo nkọwa:
Ọ bụrụ na mgbaàmà crypto na-agwa gị ka ị gaa ogologo oge, mgbe ahụ ịkwesịrị itinye iwu ịzụta na onye na-ere ahịa crypto ị họọrọ
Ọ bụrụ, agbanyeghị, akara mkpuchi crypto na-agwa gị ka ị gaa mkpụmkpụ, mgbe ahụ ị ga-ahọrọrịrị usoro ire ere
Ndị otu nyocha na PipSignals nwere ntụsara ahụ na-aga ogologo na mkpụmkpụ na ụzọ abụọ crypto. N'ụzọ dị oke mkpa, enweghị mmetụta mmetụta uche na ụdị ego dijitalụ anyị na-ere. Kama, ebumnuche anyị bụ iji nweta uru site n'ọkwá ahụ.
Emehiela banyere ya - ihe nrịba ama kachasị mma ga-abịa na ọnụahịa ego achọrọ achọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ maka ịzụ ahịa, ị n'ozuzu nwere nhọrọ abụọ mgbe ị banyere ịbanye n'ahịa.
Site na ndabara, ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-ajụ gị ma ịchọrọ itinye 'usoro ahịa'. Nanị nke a pụtara na onye na-ere ahịa ga - emezu ahia gị ozugbo - na ọnụ ahịa dị ọzọ.
Agbanyeghị na nke a dị mma maka itinye ego ogologo oge, ọ gaghị adabara adaba maka azụmaahịa mkpụmkpụ. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ihe ọghọm-iweghara ịbanye ahịa na ọnụahịa akọwapụtara - dịka nyocha emere na-egosi.
Ọmụmaatụ, ka anyị were ya na anyị na CryptoSignals.org na-ere ahịa BTC / USD - nke ugbu a ọnụahịa $ 49,500.
Ndị otu anyị na-enyocha ụlọ nwere ike ile anya na teknụzụ wee kpebie na BTC / USD ga-emebi $ 50,000 - mgbe ahụ, a ga-ewere ọnọdụ dị ogologo.
Iji hụ na anyị na-abanye naanị na ọnụahịa karịa $ 50,000 - ọ bụghị ego dị ugbu a nke $ 49,500 - nke a bụ ebe iwu ịgba ga-abata.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, iji mee ka ahịa anyị gbuo na $ 50,000 - anyị ga-emerịrị oke oke na ọnụahịa a. Mgbe anyị mere, onye na-ere ahịa anyị ga-eme ahịa anyị naanị ma ọ bụrụ na mgbe BTC / USD ruru $ 50,000. Ruo oge ahụ, usoro ịgba ga-anọgide na-echere.
N'ihe niile ma obere okwu ole na ole, akara ngosi crypto niile na CryptoSignals.org ga-abịa na ọnụego iwu akwadoro. Nanị ihe dị ebe a bụ ma ọ bụrụ na anyị ahụ ohere azụmaahịa kwesịrị ime ihe ozugbo iji zere ịhapụ.
Ruo ugbu a, anyị achọpụtala na akara ngosi crypto kachasị mma ga-agwa gị ihe otu ị ga-azụ, ma ị kwesịrị ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, yana kedu ọnụahịa ntinye ị kwesịrị ịtọ usoro ịgba gị.
Otú ọ dị, nke a bụ nanị ọkara agha ahụ. A sị ka e kwuwe, iji zụọ ahịa n'ụzọ na-adịghị ize ndụ, ị kwesịrị ịnwe usoro ntinye.
Ọzọkwa, anyị nọ na CryptoSignals.org hụ na ị nwere ozi niile ịchọrọ iji rite uru site na akara crypto - nke mere na anyị na-enye iwu nkwụsị na nkwụsị na-aba uru. Banyere nkwụsị-ọnwụ, nke a bụ ihe njikwa njikwa ihe egwu na-egosi na anyị anaghị atụfu nnukwu ego na azụmaahịa - ọ bụrụ na ọ gaghị aga ịhazi.
Nke a dị mkpa, dịka ọ bụ ezie na anyị nwere ndekọ dị ogologo nke ịmepụ ahịa ahịa crypto - anyị anaghị ekwu na anyị meriri azụmaahịa ọ bụla.
Kama nke ahụ, ahịa ga-ada mgbe niile. N'iburu nke a n'uche, anyị na-atụ aro ọnụahịa ego nkwụghachi ụgwọ kwesịrị ekwesị nke ịkwesịrị idenye mgbe ị na-eme akara ngosi crypto.
N'ihe atụ nke mgbaàmà crypto anyị nyere na mbụ, anyị kwuru na ekwesịrị itinye ogologo ọnọdụ na BTC / USD na ọnụego ntinye nke $ 231.79. Anyị kwukwara na a ga-etinye iwu ịkwụsị nkwụsị na $ 229.48.
Nke a bụ ezigbo ihe kpatara ya - n'ihi na nke a na-anọchi anya mfu kachasị nke 1%. Nke ahụ bụ ịsị, ọ bụrụ na BTC / USD na-aga imegide anyị site na 1% ma mesịa kụọ ọnụahịa nke $ 229.48 - iwu nkwụsị ga-amalite. Mgbe ọ mere, onye na-ere ahịa crypto ga-emechi ọnọdụ anyị na akpaghị aka anyị ga-eje ije pụọ na obere ọnwụ nke 1%.
E nwere otu ozi dị mkpa dị mkpa karịa akara kacha mma crypto ga - enye gị - nke ahụ bụ ọnụ ahịa ịtụ ahịa iji nweta uru. Nke a na - arụ otu ọrụ dị ka iwu nkwụsị, mana kama ịbelata ihe egwu anyị, ọ ga - achọ igbachi uru anyị na azụmaahịa ahụ.
N'ihe atụ anyị nyere na mbụ, anyị kwuru na ọnụ ahịa ịtụ ahịa ahịa a tụrụ aro bụ $ 238.74. Nke a na-anọdụ na 3% karịa ọnụahịa nkwụnye ego a tụrụ aro nke $ 231.79 - nke pụtara na anyị na-achọ inweta uru nke 3% na akara ngosi crypto a.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọnụ ahịa na-enweta ego ga-adaba site na ahịa - onye na-ere ahịa crypto na ajụjụ ga-emechi ahịa ahụ na-akpaghị aka. Dị ka ndị dị otú a, anyị nwere ike igbachi na uru anyị na-enweghị mkpa ịnọdụ ala na ngwaọrụ anyị iji jiri aka wepu ọnọdụ ahụ.
Na-eduga na ngalaba ahụ dị n'elu na nkwụsị nkwụsị na iji nweta-uru, ndị otu nyocha na CryptoSignals.org ga-enwerịrị ihe egwu / ụgwọ ọrụ n'uche mgbe niile izipu akara crypto.
Na ihe atụ dị n'elu, ihe egwu dị na 1% - dịka nke ahụ bụ ihe ọnụahịa nkwụsị-efu anyị tụrụ aro. Rewardgwọ ọrụ nke akụkụ ahụ bụ 3% - dịka nke ahụ bụ ebe anyị debere usoro iji nweta-uru anyị.
N'ụzọ dị oke mkpa, ọtụtụ nrịbama crypto anyị na-ezipụ ga-agbaso oke ihe ize ndụ / ụgwọ ọrụ 1/3. N'okwu dị mfe, nke a pụtara na anyị na-etinye 1% nke isi obodo anyị n'ihe ize ndụ iji nweta uru nke 3%. N'ime nke a, naanị anyị kwesịrị inwe otu azụmaahịa na-aga nke ọma n'ime atọ ọ bụla iji nweta uru.
Ihe mgbaàmà Crypto maka ndị mbido na CryptoSignals.org
01. Ghọta Ahịa
You na-achọ ịzụ ahịa cryptocurrencies dị ka Bitcoin,
Ethereum, na Ripple - mana ha aghotaghi otu ahia a si aru oru?
Ọ bụrụ otu a, ị kwesịrị ịma na ndị ahịa nwere ọkaibe ejirila ọtụtụ afọ mụọ ọrụ nka nyocha. Nke a pụtara
na-eme nyocha dị elu banyere usoro ọnụahịa cryptocurrency site na ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche. Chee echiche banyere usoro RSI, MACD, Mbugharị Mbugharị, na ndị ọzọ.
02. Nweta nkà anyị
Eziokwu bụ - ma ọ bụrụ na ịnweghị nkà-setịpụrụ ịrụ ọrụ aka
nyocha na ọkwa dị elu, ị ga-agbasi mbọ ike ịme
uru na-agbanwe agbanwe na ụlọ ọrụ azụmaahịa crypto. Kama, enwere ohere ọ bụla ị ga-eme site na njikwa akaụntụ gị. N'aka nke ya, nke a na - enye gị ohere ịzụ ahịa ahịa cryptocurrency na-enweghị mkpa itinye ọrụ ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, anyị kwesịrị ịmara na akara akara crypto anyị adabaghị naanị maka ndị ọhụrụ. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike ịnweghị oge ị ga-enyocha ahịa. Dị ka ndị dị otú a, CryptoSignals.org nwere ike inyere ndị ahịa nke nkà aka niile!
03. Azụmahịa na Uru
Nke a bụ ebe CryptoSignals.org nwere ike inyere aka. Ka anyị na-akọwa nkọwa zuru ezu na ala, akara akara crypto ga-agwa gị
ihe niile ị chọrọ ịma iji zụọ ahịa n'ụzọ egwu. Nke ahụ bụ ịsị, ozugbo ị natara ihe mgbaama n'aka anyị - ị ga-ama nke ụdị ndị ahịa iji zụọ ahịa, ma ị ga-aga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, yana ụdị ntinye na ụzọ ọpụpụ iji zube.
Nke ahụ bụ Ihe Ndị Ahịa Anyị Na-agwa
Amaghị m ihe m na-eme kama ebe m sonyeere otu telegram bụzi m mepee akaụntụ na a ọkachamara ore ahia na m ugbu a na-eso ahia site na otu VIP. Ugbu a, m na-agụ nyocha ọrụ ntanetị kwa ụbọchị ma soro youtube ọwa ma lelee vidiyo niile.
Amụtawo m ọtụtụ ihe banyere crypto ebe m banyere VIP Telegram otu. Ebe ahụ bụ isiokwu kwa ụbọchị m nwere ike gụọ ma azụmahịa ka ọ kwado ndabere nke ahụ ozi. Ọ bụ otu 10 n'ime 10 maka m.
M sonyeere Telegram n'efu wee kwalite ngwa ngwa na ndị VIP. Achọpụtara m na teknụzụ nyocha na-enye ihe ọmụma na nke ahụ na-enyere m aka ịmụtakwu banyere cryptocurrency na otu esi azụ ya.
Ihe ngosi ndi enyere bu odi mfe igbaso.
ANY SE NA-EZI AKW TKWỌ AKECKỌ ỌR WITH ỌR WITH N'WITHLỌ ỌH WITHR,, G SEỌ SELỌ NT EXTA nke Ahịa anyị!
Ejirila orslọ Ahịa Ahịa Site n'Aka Worldwa Dum!
Nwere ike isonyere n'efu Otu VIP n'okpuru na ịpị bọtịnụ iji hụ ihe atụ nke ahịa anyị.
Ịhọrọ onye na-ere ahia
Ihe kacha mma CRYPTO SIGNALS
Ọbụghị naanị na ịchọrọ ịchọta akara ngosi kacha mma dị na ahịa - kamakwa onye na-ere ahịa kacha elu iji debe iwu achọrọ. A sị ka e kwuwe, na-enweghị ezigbo onye na-ere ahịa n'akụkụ gị, ị gaghị enwe ike ịnweta ọnọdụ azụmaahịa crypto.
Tupu i lebanye anya na ego na ugwo, o di nkpa na i jiri akara crypto anyi na onye ahia kwesiri ntukwasi obi. O di nwute, otutu uzo ahia crypto na aru oru n'enweghi ikike ichikota - nke bu oke nsogbu. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a pụtara na onye na-ere ahia adịghị mkpa ịzaghachi ahụ ike nke ụdị ọ bụla - yabụ ihe dịka nlekọta ndị ahịa na nchebe ndị na-achụ ego na-abụkarị enweghị. Iji nyere gị aka igosi gị n'ụzọ ziri ezi - ụfọdụ n'ime ndị isi nchịkwa na oghere a gụnyere FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia) na CySEC (Cyprus). ...
Dị ka ụfọdụ akara ngosi crypto anyị na-eleba anya ngwa ngwa na ịdị obi umeala, ọ dị ezigbo mkpa ka ịhọrọ onye na-ere ahịa nke na-enye ọrụ dị ala na mgbasa ozi siri ike. Banyere nke mbụ, e nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa crypto na-arụ ọrụ na oghere nke na-enye gị ohere ịzụ ahịa na-enweghị ọrụ. Nke a pụtara na naanị ego ị ga-akwụ na-abịa site na mgbasa.
Ọ bụghị ndị otu anyị niile nọ na otu CryptoSignals VIP Telegram nwere nnukwu ego iji zụọ ahịa. Ọ bụrụ na nke a dị ka gị, nke a apụtaghị na ị nweghị ike ịme ngosipụta anyị nke ọma. N'ụzọ megidere nke ahụ, site na iji onye na-ere ahịa na-enye ego, ị ga-enwe ike ịzụ ahịa karịa ihe ị nwere na akaụntụ gị. Ọnụ ego ị ga-enweta ga-adabere n'ọtụtụ ihe - dị ka onye na-ere ahịa na ajụjụ yana mba ị bi na ya.
Naanị n'ihi na onye ahịa ị họọrọ na-enye ahịa ahịa dijitalụ, nke a apụtaghị na ọ ga-adabara akara ngosi crypto. A sị ka e kwuwe, ndị otu na-enyocha ụlọ na-enwe mmasị ịme ụzọ dịgasị iche iche maka ịzụ ahịa - nke pụtara na ha na-elekwasị anya ụdị abụọ nke ụdị na nha. Dịka ọmụmaatụ, otu mgbaàmà nwere ike ịkọ na BTC / USD ebe onye na-esote nwere ike ile anya inweta uru site na ETH / XRP! N'iburu nke a n'uche, ọ kachasị mma iji onye na-ere ahịa crypto na-enye ọtụtụ ahịa - na-ekpuchi ma ụzọ crypto-to-fiat na crypto-to-crypto.
I kwesịkwara ijide n'aka na onye ị na-ere ahịa crypto na-enye ụzọ ịkwụ ụgwọ ị họọrọ. Ihe ntanetị kachasị mma anyị na-achọ iji nyere debit / kaadị akwụmụgwọ na e-obere akpa ego. Nke a na - enye gị ohere itinye ego na akaụntụ gị n'otu ntabi anya na n'ọtụtụ ọnọdụ - n'efu. Nwere ike izere nyiwe na-anakwere ịkwụ ụgwọ ego ụlọ akụ. Nke a bụ maka na o nwere ike were ụbọchị ole na ole ka ego wee rute.
Ọ na-ekwu na Bitcoin bụ nke kacha zụọ ahịa cryptocurrency na ahịa a. Dị ka ndị dị otú a, ndị ahịa anyị ga-ele anya na-enweta uru site na klas a dị oke mmiri. Ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọnọdụ, anyị ga-eziga akara ngosi azụmahịa Bitcoin anyị na BTC / USD - anyị na-ekpuchikwa crypto-to-crypto ụzọ abụọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị na-eme nchọpụta n'ime ụlọ anyị chere na BTC abaghị uru karịa ETH - anyị ga-eziga mgbaàmà azụmaahịa Bitcoin na nchọta anyị. Iji nye gị echiche nke otu akara ngosi azụmaahịa Bitcoin kacha mma na-arụ ọrụ ebe a na CryptoSignals.org - lelee ihe atụ dị n'okpuru. Mmakọ: BTC / USD Order: Sho ...
Might nwere ike ịchọpụtala na akara ngosi crypto kachasị dị na ahịa na-enweta site na otu Telegram. Nke a bụ n'ihi na ị ga-enweta ezigbo akara ngosi crypto na ezigbo oge - nke pụtara na ị gaghị echefu ohere ị nweta uru ọzọ! Kacha mma crypto n'ókè Telegram iche iche a nwere ọtụtụ puku nọ n'ọrụ òtù. Nke a na - enye gị na ndị otu gị ohere iji tụlee echiche azụmaahịa crypto site na ngwa ahụ. Kacha mma crypto n'ókè Telegram iche iche na-abịa na ezigbo oge ahịa nkwado. Ọbụna nke ka mkpa, site na ịnweta akara dị mma site na Telegram - ndụmọdụ kacha mma ...
Tupu i lebanye anya na ego na ugwo, o di nkpa ka i jiri akara crypto anyi na onye ahia kwesiri ntukwasi obi.
O bu ihe nwute, otutu ebe ahia ahia na aru oru n’enweghi ikike ikike ichikota - nke bu nnukwu nsogbu.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a pụtara na onye na-ere ahia adịghị mkpa ịzaghachi ahụ ike nke ụdị ọ bụla - yabụ ihe dịka nlekọta ndị ahịa na nchebe ndị na-achụ ego na-abụkarị enweghị.
Iji nyere gị aka igosi gị n'ụzọ ziri ezi - ụfọdụ n'ime ndị isi nchịkwa na oghere a gụnyere FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia), na CySEC (Cyprus).
Dika ufodu n’ime akara anyi bu uzo anyi choro ngwa ngwa na obi oma, odi nkpa ka ichota onye ahia nke n’enye onyinye di ala na agbasa agbasa.
Banyere nke mbụ, e nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa crypto na-arụ ọrụ na oghere nke na-enye gị ohere ịzụ ahịa na-enweghị ọrụ. Nke a pụtara na naanị ego ị ga-akwụ na-abịa site na mgbasa.
Naanị n'ihi na onye ahịa ị họọrọ na-enye ahịa ahịa dijitalụ, nke a apụtaghị na ọ ga-adabara akara ngosi crypto.
A sị ka e kwuwe, ìgwè anyị nke ndị na-enyocha ụlọ na-enwe mmasị ịme ụzọ dịgasị iche iche nke ịzụ ahịa - nke pụtara na ha na-elekwasị anya ụdị abụọ nke ụdị na nha niile. Dịka ọmụmaatụ, otu mgbaàmà nwere ike ịkọ na BTC / USD ebe onye na-esote nwere ike ile anya inweta uru site na ETH / XRP!
N'iburu nke a n'uche, ọ kachasị mma iji onye na-ere ahịa crypto na-enye ọtụtụ ahịa - na-ekpuchi ma ụzọ crypto-to-fiat na crypto-to-crypto.
I kwesịkwara ijide n'aka na onye ị na-ere ahịa crypto na-enye ụzọ ịkwụ ụgwọ ị họọrọ. Ihe ntanetị kachasị mma anyị na-achọ iji nyere debit / kaadị akwụmụgwọ na e-obere akpa ego. Nke a na - enye gị ohere itinye ego na akaụntụ gị n'otu ntabi anya na n'ọtụtụ ọnọdụ - n'efu.
Nwere ike izere nyiwe na-anakwere ịkwụ ụgwọ ego ụlọ akụ. Nke a bụ n'ihi na o nwere ike were ụbọchị ole na ole tupu ego enweta.
Ọ na-ekwu na Bitcoin bụ nke kacha zụọ ahịa cryptocurrency na ahịa a. Dị ka ndị dị otú a, ndị ahịa anyị ga-ele anya na-enweta uru site na klas a dị oke mmiri.
Ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọnọdụ, anyị ga-eziga akara ngosi azụmahịa Bitcoin anyị na BTC / USD - anyị na-ekpuchikwa mkpuchi crypto-to-crypto. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ndị na-eme n ’ụlọ anyị eche na BTC abaghị uru karịa ETH - anyị ga-ezipụ akara ngosi azụmahịa Bitcoin na ihe anyị chọpụtara.
Iji nye gị echiche nke otu akara ngosi azụmaahịa Bitcoin kacha mma na-arụ ọrụ ebe a na CryptoSignals.org - lelee ihe atụ dị n'okpuru.
Zọ: BTC / USD
Oke: $ 61,500
Nkwụsị-Loss: $ 62,000
Were-Uru: $ 57,000
Ntụziaka mgbaàmà Bitcoin dị n'elu na-egosi na ndị ahịa anyị nọ n'ime ụlọ kwenyere na BTC / USD ga-adalata n'ime awa ndị na-abịanụ. Mana, anyị achọghị ịbanye n'ahịa ahụ belụsọ na ụzọ abụọ ahụ kụrụ ebe anyị masịrị - nke na ihe atụ a bụ $ 61,500.
Iji hụ na anyị kpuchiri ya ma ọ bụrụ na anyị agaa n'ihu, akara ngosi Bitcoin na-adụ ọdụ ọnụahịa nkwụsị nke $ 62,000.
Nke a bụ ihe anyị na-enye mgbe niile mgbe anyị na-ekesa akara ngosi Bitcoin dị mma - ebe anyị maara nke ọma ịzụ ahịa azụmaahịa. Ihe ngosi ahia ahia Bitcoin anyi nwekwara usoro ichoro iji nweta ego. Ọ bụrụ na ịmalite, nke a ga-emechi uru gị na akpaghị aka na onye na-ere ahịa crypto ịchọrọ.
Free Bitcoin Trading n'ókè
You nọ n'ahịa maka akara ngosi Bitcoin n'efu? Ọ bụrụ otu a, anyị nọ na CryptoSignals.org na-enye ọrụ mgbaàmà Bitcoin n'efu nke mejupụtara atụmatụ azụmahịa atọ kwa izu. N'adịghị ka ọtụtụ n'ime ndị asọmpi anyị - anyị anaghị agwa gị ka ịkwụkwuo ego iji kpughee njedebe ịgba ma ọ bụ ọnụahịa nkwụsị.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ị ​​ga-enweta ozi niile anyị tụlere n'elu - yabụ nke ahụ bụ ụzọ Bitcoin, ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, yana oke, nkwụsị nkwụsị, na ọnụ ahịa uru.
Ihe kpatara na anyị na-enye n'efu akara ngosi azụmaahịa Bitcoin bụ na nke a na-enye ndị ọhụrụ ohere ịnwale ọrụ anyị tupu ha emee nkwa. N’ụzọ dị mkpa, ihe niile ị ga - eme iji nweta akara ngosi Bitcoin n'efu bụ debanye aha na akaụntụ anyị ebe a na CryptoSignals.org.
Don'tkwesighi ịkwụnye ego ọ bụla iji nweta ohere iji nweta akara ngosi crypto na-akwụghị ụgwọ. Kama nke ahụ, ozugbo ị debanyere aha - ị nwere ike ịgafe na otu akara ngosi Telegram anyị n'efu!
Might nwere ike ịchọpụtala na akara ngosi crypto kachasị dị na ahịa na-enweta site na otu Telegram. Nke a bụ n'ihi na ị ga-enweta ezigbo akara ngosi crypto na ezigbo oge - nke pụtara na ị gaghị echefu ohere ị nweta uru ọzọ!
Kacha mma crypto n'ókè Telegram iche iche a nwere ọtụtụ puku nọ n'ọrụ òtù.
Nke a na - enye gị na ndị otu gị ohere iji tụlee echiche azụmaahịa crypto site na ngwa ahụ.
Kacha mma crypto n'ókè Telegram iche iche na-abịa na ezigbo oge ahịa nkwado.
Ọbụna nke ka mkpa, site na ịnweta akara ngosi dị mma site na Telegram - ndị na-enye ọrụ kachasị mma na oghere a ga-etinyekwa eserese ma ọ bụ eserese na aro ọ bụla.
Yabụ, ndị kasị mma crypto n'ókè Telegram iche iche-enye gị ohere irite na-amụ n'otu oge.
Tupu ịmalite na akara ngosi kachasị mma nke Telegram otu ị na - ahọrọ, anyị ga - atụ aro ịtọlite ​​ngosi ọhụụ. Site n'ịhụ na ọkwa ọkwa a dị iche na akara crypto gị Telegram otu - ị ga-ama ịmepe ngwa ahụ ozugbo ka ị nwee ike itinye iwu ndị a tụrụ aro.
Free Crypto n'ókè n'ókè Telegram Group
Offọdụ n'ime gị nwere ike ịnwale akara ngosi crypto dị mma anyị tupu ịmalite ịkwalite atụmatụ anyị. Ọ bụrụ otu a, ị ga-enwe ọ toụ ịmara na anyị na-enyekwa akara mgbanye ozi Telegram otu. Ozugbo ị sonyere ọwa Telegram anyị na - eto eto - ị ga - enweta akara ngosi crypto 3 x n'efu kwa izu.
Nke a nwere ike ikpuchi mkpuchi abụọ-to-crypto dị ka BTC / EUR, BTC / USD, ma ọ bụ ETH / USD. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ụfọdụ akara ngosi crypto anyị n'efu ga-ekpuchi ụzọ abụọ nwere akụ abụọ dijitalụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eziga akara ngosi crypto anyị n'efu na BTC / ETH, BTC / XRP, na ETH / LTC.
Ozugbo ị nwetara akara ngosi crypto n'efu site na otu Telegram anyị - ihe niile ị ga - eme bụ ịgakwuru onye ahịa ị họọrọ ma debe iwu ndị a tụrụ aro. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye azụmaahịa maara ihe - ị nwere ike kpebie ịnwale anyị site na akaụntụ ngosi azụmaahịa efu.
N'ime ime nke a - ịkwesighi itinye otu penny n'ihe mgbaàmà mkpuchi anyị n'efu. Kama nke ahụ, ị ​​ga-etinye 'iwu akwụkwọ' itinye iwu anyị tụrụ aro. Mgbe emechiri ọnọdụ mgbaama ọ bụla - ị nwere ike idepụta nsonaazụ ọnọdụ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị mere pipụ 25 na mgbaàmà crypto n'efu, gbaa mbọ hụ na ị deturu nke a. Ná ngwụsị nke ikpe gị - ọ bụrụ n'ịchọta na akara ngosi crypto anyị anaghị akwụ ụgwọ emezuola ihe ị tụrụ anya ya - ị nwere ike ịtụle nwelite na atụmatụ adịchaghị anyị. N'ime ime nke a, ị ga-enweta akara ngosi crypto kacha adịkarị 3-5 kwa ụbọchị!
GN IN B INR IN NA ANY VIP VIP CRYPTO SIGNAL Otu TELEGRAM
Soro ndị 10,000 anyị nọ ugbu a si n'akụkụ ụwa niile na-erite uru na nke anyị Ihe mgbaàmà VIP Crypto ma buru ndi ahia ahia.
3-5Ihe mgbaàmà Crypto otu ụbọchị
82%Ihe ịga nke ọma
10k +Ndi otu Telegram
Dịla njikere ịbụ
ỌMA ahịa CRYPTO na-aga nke ọma?
CryptoSignals.org bụ otu ndị ahịa zụrụ azụ nke na-azụ ahịa ahịa ahịa ahịa kemgbe 2014, anyị kpebiri ịmebe obodo telegram ka ndị ọzọ nwee ike ịmụta site na akara ngosi cryptocurrency ziri ezi anyị.
Gaa na anyị na mgbasa ozi ọha
Akara ngosi Crypto efu kacha mma Mee 2022 & Akụkọ Crypto
Fort Street, Ụlọ Artemis,
© 2022 CRYPTOSIGNALS.ORG. Edebere OKWU niile. Ozi dị na webụsaịtị cryptosignals.org na n'ime otu Telegram anyị bụ maka ebumnuche mmụta na agaghị ewere ya dị ka ndụmọdụ itinye ego. Ịzụ ahịa ahịa ego na-ebu nnukwu ihe ize ndụ na ọ gaghị adị mma maka ndị investors niile. Cryptosignals.org anaghị anabata ọrụ maka mfu kpatara n'ihi ọdịnaya enyere n'ime otu Telegram anyị.